भनेकै समयमा गर्भ बस्नको लागि यो समयमा यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ- डा. सबिना यसो भन्छिन - Sabal Post
भनेकै समयमा गर्भ बस्नको लागि यो समयमा यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ- डा. सबिना यसो भन्छिन
काठमाडौं – नेपालमा पछिल्लो समय बाँझोपन एक जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसमा महिला र पुरुष दुबैको गल्ती हुने जानकारहरु बताउँछन । लामो समय देखि डा. सबिना सिम्खडा यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो ।
दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा म’हिनावारी भएको १० देखी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने उनले सुझाएकी छिन् । पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भारतबाट बाँ’झोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा.सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भारतीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । जनबोलीबाट